GitHub yakatanga kudzora kupinda kune vashandisi munzvimbo dzakatarirwa nezvirango zveUS | Linux Vakapindwa muropa
GitHub yakatanga kudzora kupinda kune vashandisi munzvimbo dzakatarirwa nezvirango zveUS.
GitHub yakaburitsa vhezheni nyowani yemitemo kutonga kutevedza nemirau yeUS yekunze. gadzirisa zvinorambidzwa kune zvakavanzika mari uye maakaundi emakambani emakambani anoshanda mumatunhu akatemerwa zvirango (Iran, Cuba, Siria, Sudan, North Korea), asi kusvika parizvino havasati vashandiswa kune vamwe vanogadzira mapurojekiti asiri ezvekutengesa.
Iyo itsva edition yemitemo ine tsananguro inoratidza mukana wekudzikisira basa yeveruzhinji masevhisi evashandisi vega ari munzvimbo dzezvirango.
Kune vashandisi ava zvinokurudzirwa kushandisa chikuva chete kwekutaurirana wega.
Kunze kwekuchinja mitemo, GitHub zvakare yakatanga mukudzidzira kudzora kupinda kune masevhisi ayo kune vasiri-vekutengesa vashandisi vanobva munyika dzakatemerwa.
Izvi zvakafumurwa sezvo mune imwe yemishumo yemushandisi yewebhu yekubatira sevhisi uye software manejimendi ye GameHub paLinux ndinotaura nezvazvo.
Iko kunyorera kunoshandiswa kuisa mune imwe raibhurari yese Steam, GoG, Humble Bundle, Humble Trove uye nemitambo yakagadzwa imomo zvakazvimiririra. Kutenda GameHub, iwe unogona kuona nekutarisa, kurodha pasi, kuisa, kusunungura uye kuvhura mitambo, asi zvakare mabhonasi kana GoG DLC.
“Akaundi yangu yakavharwa nekuda kwezvirango zveUnited States. Unogona kusakwanisa kuchengeta GameHub mune ramangwana, "anodaro mune tikiti richangobva kuvhurwa pachikuva.
Iyi mamiriro ezvinhu akaunza kufarira kwakawanda munharaunda yekuvandudza uye akasundidzira vamwe kuti vatamire zvizere papuratifomu. Izvi ndizvo zvinosimbisa Ahmed Saeedi Fard, uyo, semuchengeti weGameHub, parizvino ane zvimwe zvake zvekuchengetedza zvakavanzika.
Naizvozvi, mukana wekugadzira dura renyowani wakasiiwa. Kuti abvise zvirambidzo, zvakanzi zvipe humbowo hwekuti mushandisi haagare muCrimea, asi Kashkin mugari weRussian Federation anogara uye anonyoreswa muCrimea, saka hazvigoneke kuendesa chikumbiro.
"GitHub yanga iri yemahara chikuva chevanhu vese kwemakore mazhinji, asi yafunga kuvhara maIran account. Ini ndinofunga kuve nyika haisi sarudzo, asi kuve unogadzira uye uchipa kune yakavhurika sosi nharaunda sarudzo. GitHub inorambidza rusununguko rwedu rwekupa uye kuve chikamu cheyakavhurika sosi ecosystem nekuti tinogara muIran.
GitHub yakavharira edu epamoyo marekodhi pasina yambiro uye ikozvino hatichakwanise kuwana macode. Iwe haufanire kutonga vanhu zvichienderana nenyika yavakaberekerwa. Unogona kudzora hurumende, asi haufanire kurambidza vashandisi vayo vanoshanda uye vakavimbika pasina ziviso.
Ini ndinofunga kuve nyore GitHub peji iri rakakosha kodzero kune vashandisi. Musatiburitse munharaunda yakasvinuka, ”akadaro.
Zvakafanana zvipingamupinyi zvinoshandiswa kune vakawanda vanogadzira Iranian, iyo yaive zvakare yavhara mahara emahara madhipatimendi uye akavhara mapeji paGitHub Mapeji.
Nhepfenyuro dzakavharwa pasina chiziviso chekare uye pasina kupa mukana wekusimudzira (kusanganisira sevhisi yekutsigira sevhisi inoramba kupa izvozvi ruzivo rwevharidzirwa masevhisi). Panguva imwecheteyo, kuwanikwa kune zvinyorwa zveveruzhinji zvinopihwa kune wese munhu pasina shanduko.
Aya matanho zvinogona kutarisirwa nenzira kwayo sekuwedzeredzwa kweavo vanobva muhondo yekutengeserana pakati peUnited States neChina.
Asi izvo, pakati paMay, Mutungamiri Donald Trump vakasaina chirevo chinoisa hwaro hwekudzivirira makambani ekufambisa mafoni eChinese akaita seHuawei kutengesa zvigadzirwa muUnited States.
Chinangwa chekufamba ndechekudzikisira kugona kweChina kukanganisa maUS wireless network.
Uye anotevera-chizvarwa makomputa masystem. Iwo murairo unorambidza kutenga kana kushandiswa kwechero tekinoroji yekutaurirana inogadzirwa nemasangano anodzorwa ne "anopikisa wekunze" anogona kukanganisa masisitimu ekutaurirana eUS kana kugadzira "njodzi dzinokanganisa" pane zvivakwa zveUS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » GitHub yakatanga kudzora kupinda kune vashandisi munzvimbo dzakatarirwa nezvirango zveUS.
Nei hutongi hwehunyanzvi hwakakosha uye nzwara dzaMicrosoft pamusoro pemahara software zvine njodzi?
Muchikamu chino unogona kuona zvimwe zvikonzero.
Vhura sosi mitauro yepamberi-kumagumo chirongwa